Xildhibaan Ku Eedeeyay Maayarka Burco Waxqabad La’aan. | Salaan Media
Xildhibaan Ku Eedeeyay Maayarka Burco Waxqabad La’aan.
April 19th, 2013 Comments Off
Burco(SM)-Enj.Cabdirashiid Faarax Cali oo ka mid ah golaha deegaanka Burco ayaa markii u horeysay shaaca ka qaaday waxqabad la’aanta ku habsatay Dawladda Hoose ee Burco mudadii ay joogeen maayirka cusub Maxamed Muraad iyo ku xigeenkiisu Mr Xoday.
Sidoo kale xildhibaanka ayaa kormeer uu sameeyay maalmihii u danbeeyay ku soo badhigay dhibaatooyinka ka jira magaalada Burco ee ay Dawladda Hoose ku fashilantay in ay wax ka qabato kuwaasi oo qarka u saran in ay xaxuuno ka dilaacaan wakhtigan aynu ku jiro ee xili roobaadka ah.
Xildhibaankan ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Burco isla markaana waxa uu ugu baaqay bulshadda reer Burco in ay la xisaabtamaan golaha deegaanka ay doorteen oo ay xafiisyadooda ugu yimaadaan si wax loogu qabto.
“Iyadoo ay dhakada naga saaranyahay 21 xildhibaan ee golaha deegaanka Burco badbaadada umadu iyo waxqabadkoodu ,waxaan maanta halkan ka cadaynayaa marka kowaad nadaafadda magaaladu waxay maraysaa meel khatar ah iyadoo lagu jiro xili roobaad dukhsigii dilaacay.
Marka labaad-na waxaan idiin-cadaynayaa waxqabadkii aanu idiin balanqaadnay oo aan habayaraatee waxba ka fulin xiligii doorashadda ,sida Wadooyinka ,Bilicda magaalada ,Moosaska biyaha iyo Dhag-xaanta wadooyinka xidhay . Waxa taasi ka daran Biyihii roobabka oo xumaaday ayaa xaafadaha magaalada fadhiya oo xiitaa godkii qashinka magaalada lagu qubi-jiray ayaa Xaafadihii soo galay markuu buux-dhaafay kuwaasi oo aan ilaa Toban jeer ka digay intaan u tegay masuuliyiinta fulinta Dawladda Hoose ,balse ay dhagaha ka furaysteen Maayirka ,Maayir Ku xigeenka iyo Xoghayaha Dawladda Hoose,” ayuu xildhibaanku yidhi.
Waxaanu intaasi ku daray oo uu ugu baaqay bulshadda reer Burco in ay gudiyo xaafadeed samaystaan oo ay la xisaabtamaan Dawladda Hoose waxaanu yidhi “ Waxaan leeyahay shicibka Qaylo-dhaan sameeya magaaladu in shuban biyood ka dilaaco ayay qarka u saran tahaye maadaama cashuur laydinka qaado ,oo gudiyo xaafadeed samaysta oo nala xisaab-tam anagu xildhibaano ahaan wixii aanu dhibaatooyinka magaalada ka jira ka qaban lahayn Maayirka ,Ku xigeenkiisa iyo Xoghayaha ayay gacanta ugu jirtaa oo ku gudban.”
Sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Faarax ayaa shirkan jaraa’id ee uu Saxaafadda ugu waramay ku soo bandhigay Sawiro ay ka muuqanayaan dhibaatooyinka ka jira magaalada Burco ee ay Dawladda Hoose ku fashilantay in ay wax ka qabato isla markaana waxa uu u mahad-naqay mawaadiniin reer Burco ah oo dhawaan ka hadlay dhir dumin gaadhay Biriijyadda Burco kuwaasi oo markii danbe laga guray.
Geesta kale baaqyadda ka dhanka ah waxqabad la’aanta Dawladda Hoose ee Burco ee ka soo yeedhaaya xildhibaanada iyo Shicibka ayaa mudooyinkii u danbeeyay soo xoogaysanaayay isla markaana waxay imika arintu qarka u saarantahay in mudaharaad lagu qaado Dawladda Hoose ee Burco ,si looga daadiyo Sedexda masuul ee calooshooda u shaqaysayaasha ah ee ku habsaday ,kuwaasi oo lacag urursi iyo musuqmaasuq ku ilaabay arimihii bulshadda .